भारती सिंहले १५ किलो तौल घटाइन्, तरिका के अपनाइन् ? — Sanchar Kendra
भारतीय हास्यकलाकार भारती सिंहले आफूले १५ किलो तौल घटाएको बताएकी छिन् । भारती सिंहले एक साक्षात्कारमा आफूले इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ गर्ने र आफू यति धेरै तौल कम गर्न सफल भएकोमो चकित भएको बताइन् ।
उनले भनेकी थिइन्, ‘मेरो तौल ९१ किलोग्राम भएको छ । अब मलाई ठूल्ठूलो सास आउँदैन र म हल्का महसुस गर्छु । मेरो दम र मधुमेह पनि नियन्त्रणमा आएको छ । म यतिबेला इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ अपनाइरहेकी छु । म बेलुका सात बजेदेखि भोलिपल्ट १२ बजेसम्म केही खादिनँ ।’
जोन होपकिन्समा न्यूरोसाइन्टिस्ट मार्क मेटसनले २५ वर्षसम्म इन्टरमिटेन्ट फास्टिङको अध्यय गरेका छन् ।
उनको भनाई उद्धृत गर्दै हपकिन्समेडिसिन डट ओआरजीमा भनिएको छ, ‘हाम्रो शरीर थुप्रै घण्टासम्म वा दिन वा त्योभन्दा पनि लामो समयसम्म केही नखाई पनि बस्न सक्ने गरी विकसित भएको छ । मानिसहरुले खेती गर्न पनि नसिकेका बेला, जब उनीहरु शिकारी थिए, उनीहरुले लामो समयसम्म खाना नखाई पनि जीवन बाँच्न सिकेका थिए ।’
डा. शिखा शर्माले तपाईंले खाना खाने जुन समय निश्चित गर्नुभएको छ, त्यतिबेला तपाईंले के खाइरहनुभएको छ भन्ने कुरामा धेरै नै ध्यानमा दिनुपर्ने बताएकी छिन् ।
उनका अनुसार वैदिक साइन्सलाई हेर्ने हो भने सूर्यास्त पछि खाना नखान सल्लाह दिइन्छ । किनभने सूर्यास्त पछि खाएको खाना नपच्ने यसमा मान्यता राखिन्छ । गर्मी महिनामा सात वा साढे सात बजेसमम र चिसो मौसममा साढे पाँचपछि सूर्यास्त हुने गर्छ । यस्तोमा तपाईंले आठ घण्टामा के खाइरहनुभएको छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्न आवश्यक छ ।
उनी सल्लाह दिन्छिन्, ‘यदि तपाईं १६÷८ घण्टाको इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ गर्नुहुन्छ भने १६ घण्टामा तपाईं ग्रीन टी, भेजिटेबल जूस पिउन सक्नुहुनछ । बाँकी ८ घण्टामा तपाईं अन्न खान सक्नुहुन्छ । ब्राउन राइस, चिउरा, इडली, ओट्स, म्यूसली पनि तपाईं खान सक्नुहुनछ । गुलियो खान मन लागे चिनीको प्रयोग नगर्नुहोस्, चिनीको विकल्पमा तपाईं सख्खर खान सक्नुहुन्छ ।’